फेरी घटाए बैंकहरूले ब्याजदर, अब कुन बैंकले कति ब्याज दिन्छ ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyफेरी घटाए बैंकहरूले ब्याजदर, अब कुन बैंकले कति ब्याज दिन्छ ?
फेरी घटाए बैंकहरूले ब्याजदर, अब कुन बैंकले कति ब्याज दिन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर झन् तल झारेका छन् । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै मुद्दति निक्षेपको माथिल्लो र बचतको न्यूनतम ब्याजबीचको अन्तर ५% भन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत घोषणा गरेको थियो । बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा धेरै र साधारण बचतमा कम मात्र ब्याज दिन थालेपछि हस्तक्षेप गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
Previous articleआज नेप्से बन्द, सेयर कारोबार नहुने
Next articleविहिवार ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य